Fametahana bilaogy: Mangidihidy ara-teknika | Martech Zone
Asabotsy Jolay 14, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manaraka izany ao amin'ny lisitra ho an'ny fametahana bilaogy dia mpamaky iray hafa izay manome hevitra an-taonina amin'ny bilaogiko, Mangidihidy ara-teknika. Tsy misy tokony hanao ambanin-javatra ny lanjan'ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy (ny sasany milaza fa ny bilaogy dia tsy bilaogy raha tsy misy fanehoan-kevitra!).
Mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany voalohany koa ny teknisika itch! Arahabaina !!!
Ireto misy toro-hevitra amin'ny bilaoginao:
Miaraka amina fisehon'ny tsanganana iray, alao antoka fa apetrakao voalohany ao anaty ny html anao ny votoatinao (ny toerana dia mbola azo antsoina hoe faritra afovoany afovoany. Ny antony mahatonga izany dia satria ny Search Engine matetika dia tsy manondro ny atin'ny pejy manontolo, izy ireo misintona ny ampahany amin'ilay pejy manomboka eo an-tampony. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny sidebar html eo anoloana eo alohan'ny html atiny dia mety ho voatanisa ao amin'ny sisintaninao fotsiny ianao fa tsy ny atiny!
Ny fampiasana sary ho an'ny lohateninao Blog dia tsara - fa alao antoka fa mbola misy lahatsoratra mifandraika amin'izany izay azon'ny Search Engine afaka mandady. Aza hadino ny mamaky # 2 amin'ny tendroko ho an'ny bilaogin'ny The Blogger Tamu. Izy io dia mamelatra ireo tagy html sy style ilaina mba hampidirana ny anaran'ny bilaoginao sy ny lohateny kely.
Arakaraka ny maha-maivana ilay faritra ao amin'ilay pejy no mahasarika ny sain'ny mpamaky azy. Na dia misy aza ny tsy fitovian-doko kely eo anelanelan'ny tsanganana dia hanampy ny olona hamaky ny tsanganana mora kokoa… ary ny fahazoana antoka fa ny atiny manan-danja indrindra no maivana dia hisarika ny saina amin'izany atiny izany. Mieritreritra aho fa hanao fanandramana alokaloka sasantsasany, sidebar ary alokaloka pejy - na dia kely dia kely aza. Tsy zavatra azo refesina io, fa misy fanadihadiana marobe momba ny fahazarana mamaky tranokala manome an'io hevitra io.
Tsy tsapan'ny ankamaroan'ny olona izany, fa afaka manamboatra widgets sy endrika misintona amin'ny tranokala hafa ianao. Raharaha fotsiny ny mahita ny fisehona sy ny kilasy kilasy ampiasain'izy ireo. Mampiasa aho FireBug mba hahitan'i Firefox ny fomba fanaovan'izy ireo izany - ary avy eo ampio marika sy style fotsiny ny takelaka misy ahy araka izany.
Ny lokon'ny fononao (# 4c8ac9) dia aloky ny manga. Na izany aza, ny fampiasana azy amin'ny lohateninao sy ny sisa amin'ny pejy dia tsy mampiavaka ny rohy iray hafa. Azonao atao ny mampiasa fitaovana toa Kuler hahita loko sy alokaloka maimaimpoana. Ity misy iray ho anao (# 234F7D) somary matroka kokoa noho ny aloky ny manga ianao nefa deraina tsara. Ampiasao ny Kuler, safidio ny 'Mamorona' ary apetraho ny lokon'ny HEX. Azonao atao ny milalao ny soso-kevitr'izy ireo avy eo na manamboatra ny tenanao amin'ny alàlan'ny fitaovan'izy ireo. Mahafinaritra raha vao manomboka.
Izany no natao tamin'ity tendrony ity! Misaotra anao nanome ahy ahy ny fotoana hijerena lalina kokoa ny bilaoginao, Hangidinika Teknika! Ity bilaogy ity dia soso-kevitra indrindra ho anao izay manana Gadget fixation, fitiavana an'i Linux - na izay te hianatra misimisy kokoa momba ny famitahana ny bilaoginy.
Ahoana ny fomba ahazoana manoratra ny bilaoginao
Raha tianao ny bilaoginao Tipped, araho fotsiny ireo torolàlana ao amin'ny my Lahatsoratra fametahana bilaogy.
Tags: fametahana bilaogytoro-hevitra amin'ny bilaogymangidihidy ara-teknika
14 Jul 2007 amin'ny 5:57 PM
Tena tiako ny andianao vaovao amin'ny torohevitra blog, Doug.
14 Jul 2007 amin'ny 7:46 PM
Misaotra betsaka, engtech! Sarotra ny mamoaka fitaovana tany am-boalohany, fa tena mahafinaritra ny mihady lalina sy manao ny asa.
15 Jul 2007 amin'ny 1:07 PM
Misaotra betsaka tamin'ny nanokana fotoana hijerena ny bilaogiko. Ankasitrahana tokoa ny valiny.
Nametraka hevitra tena tsara ianao. Tsy nieritreritra momba ny endri-tsoratra na loko fiaviana teo aloha aho. Hijery an'izany aho.
Izaho koa dia nitady hanova ny lohahevitro nandritra ny fotoana kelikely ary handray an-tsambo ny hevitrao rehetra. Avelako halefa amin'ny fivoarana ianao.
15 Jul 2007 amin'ny 2:18 PM
Miloka ianao! Ary - eny - azafady mba avereno jerena ireo fivoarana.
Misaotra, mangidihidy teknika!